Ajụjụ - Shanghai Feipeng Automotive Co., Ltd
Anyị ahịa bụ isiokwu ịgbanwe dabere na ọkọnọ na ndị ọzọ ahịa ihe. Anyị ga-ezitere gị na-emelite price list mgbe gị na ụlọ ọrụ, kpọtụrụ anyị maka ndị ọzọ.
Obere iji na-anabata, ihe MOQ bụ naanị 4 PC.
N'ihi na uka mmepụta, na-edu ndú oge bụ 20-30 ụbọchị mgbe na-anata ụgwọ. The ụzọ ụfọdụ, irè mgbe (1) anyị natara ịkwụ ụgwọ gị, na (2) anyị nwere ikpeazụ unu ihu ọma gị ngwaahịa. Ọ bụrụ na anyị ụzọ ụfọdụ na-adịghị arụ ọrụ na gị n'obi imecha, biko gaa n'elu gị chọrọ na gị ire ere. N'ọnọdụ nile anyị ga-agbalị nabata gị mkpa. Ọtụtụ mgbe anyị na-enwe ike ime otú ahụ.
Ị nwere ike ime ka ugwo ka anyị akụ.
Anyị akwụkwọ ikike anyị ihe na rụọ ya. Anyị nkwa bụ gị afọ ojuju na anyị na. Na akwụkwọ ikike ma ọ bụ, na ọ bụ omenala nke anyị ụlọ ọrụ iji lebara na-edozi ihe niile ahịa mbipụta ka onye ọ bụla mma. The n'ozuzu amụma bụ ndụ maka ngwaahịa mma na ọnwa 18 maka mkpuchi.
Ee, anyị na-eji elu àgwà mbupụ nkwakọ. Specialist nkwakọ ngwaahịa na-abụghị ọkọlọtọ mbukota chọrọ pụrụ ịma ihe ọzọ ụgwọ.
The mbupu na-eri na-adabere na ụzọ ị na-ahọrọ na-ngwongwo. Express bụ ejikari ndị kacha mfe ma kasị oké ọnụ ụzọ. Site oké osimiri ibu bụ ihe ngwọta kasị mma n'ihi na nnukwu ichekwa. Kpọmkwem ibu udu anyị nwere ike na-enye gị ma ọ bụrụ na anyị maara nkọwa nke ebe, ego, arọ na ụzọ. Biko kpọtụrụ anyị maka ndị ọzọ.